जीवनशैली – Page 11 – America Nepal
Friday, June, 2017
धेरै जसो २०० देखि ५०० सम्म दिन्थे, कसैले रातभरि सुतेर पनि पैसा दिंदैनथ्यो
डिल्लीबजार जानु पर्ने भएकाले म बागबजारको बाटो हिँड्दै थिएं । पिके क्याम्पसको गेटनेर पुग्नै लाग्दा कोहि मेरो अगाडी आएर भन्यो-‘ के छ उषा ‘? कहिं देखे देखे जस्तो लाग्ने अनुहार र सुनेकै आवाज हो भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि ठम्याउन गाह्रो पर्दै थियो । आफ्नो नामै लिएर बोलाउने मान्छेलाई ‘को तपाई’ ? भनेर सोध्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दै थियो ।‘म सपना । चिनीनौ के हो ?’ उसले हाँस्दै भनि ।एकछिन त म
श्रीमानले विदेशबाट श्रीमति लिएर आए, मैले पनि अर्को विहे गरेर यहि घरमा बस्न पाउँदिन र ?
प्रश्नः– मेरो घर चितवन हो । नाम गोप्य राखिदिनु होला । मेरो एउटा जिज्ञासा छ जुन यसप्रकार छः मेरो श्रीमान् विदेशमा छन्, मलेसियामा । उनी घर फर्किदै छन् रे, उतैबाट अर्की श्रीमति लिएर । म अंश लिएर छुट्टीनु भन्दा उनी आउँदा अर्को पुरुष लिएर त्यहि घरमा बस्न पाउँछु की पाउँदिन ? कानूनी व्यवस्था के छ ? उत्तर- (अधिवक्ता सुजन पन्त): यो जटिल कुरा हो । कुरा सुन्दा तपाई दुर्इको सम्बन्ध कानुनी
‘समाचार लेखिस् भने जिउँदो रहन्नस्’
- लीला श्रेष्ठ असार २, २०७४- सूर्यविनायक–३ र मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ को सिमानामा पर्ने हनुमन्ते खोला फर्काइँदै छ भन्ने खबर शुक्रबार मध्यरातमा थाहा भयो । तत्कालै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख (एसपी), डीएसपी, नगरपालिकाका नवर्निवाचित प्रमुख लगायतलाई फोन गरेर बुझ्न खोजेँ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठबाहेक कसैले पनि फोन उठाएनन् । प्रमुख
अन्जना जसले ओलीलाई मृगौला दिएर बचांइन
केपी ओली अहिले राजनीतिको मियो बनेका छन् । उनले जेलनेल भोगका छन् । संर्घषका कैयौं घुम्ति पार गरेका छन् ।तर, यत्तिले मात्र उनी प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । प्रधानमन्त्री बन्न उनी जिवित हुनुपथ्र्यो । उनलाई जीबन दान गरेकी हुन अन्जना घिमिरेले । अन्जनाको मृगौला छ ओलीको शरीरमा ।अन्जनाले मृगौला दान नगरेको भए ओलीको जीबन के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । २०६४ सालमा ओली निकै विरामी परे ।
माईत गएर घर नफर्कने श्रीमतीसंग सम्वन्ध विच्छेद गर्दा मैले श्रीमतिलाई अंश दिनु पर्ने?
प्रश्नः मेरो नाम कृष्ण श्रेष्ठ हो । म हाल युएईमा छु । मेरो घरमा श्रीमतिले अढाई बर्षको बच्चा लिएर कुनै जानकारी नदिई माईत गएर बसेकी छिन् । यसअघि पनि उनले पटक पटक यस्तै गर्दै आएकी छन् । मैले उनलाई घर फर्किन आग्रह गर्दा नआउने र सँगै नबस्ने कुरा गर्छिन । मैले यो अवस्थामा न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ? र यस्तो घटनामा सम्वन्ध विच्छेद गर्दा मैले श्रीमतिलाई अंश दिनुपर्छ की पर्दैन ? उत्तर(
यौन र श्रम शोषणको विरुद्धमा केकी अधिकारीले गृहमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न सोधेपछि
काठमाडौं – गृहमन्त्रीलाई केकी अधिकारीको आठ प्रश्न केकी: ऊर्जा मन्त्रालयमा छोटो समयमै चमत्कार गर्नुभयो, अब आफ्नो साख जोगाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? जनार्दन: म गृहमन्त्री भएको धेरै भएको छैन । योजना बनाउने तयारीमै छु । गृह प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने र यहाँका समस्यालाई समाधान हुने खालका योजना बनाएर अघि बढ्नेछु । गृह मन्त्रालय देशभरिको प्रशासनको
काठका ठेकी बनाउँदै कृष्णबहादुर
लमजुङको दोर्दी खोला किनारमा मेसिनबाट काठका ठेकी बनाउँदै कृष्णबहादुर विश्वकर्मा । अहिले ठेकीले उचित बजार नपाउँदा चार दशकदेखि गुजारा चलाउँदै आएको यो पेशा सङ्कटमा परेको विश्वकर्मा बताउँछन् ।
बधाई छ राधिका ! तिम्री छोरी महिनावारी भइन्
विनोद ढकाल / सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा वडो साहसका साथ राधिका सापकोटाले आफ्नी हुर्कँदै गरेकी छोरीको तस्बिर राखेर बधाई दिँदै लेखिन्, ‘बधाई छ छोरी तिमीलाई, आज तिमी पहिलो पटक महिनावारी भएकी छौ । आजदेखि तिमी महिलाहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रजनन्का लागि सक्षम भएकी छौ । आज तिम्रो यौनाङ्गबाट बगेको रगत तिमिले गरेको कुनै पाप होइन, शक्ति हो । त्यसैले यसमा गर्व गर ।’ सँधै छाउपडी
सडक–पेटीमा मोजा बेचेर छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाउने बिरामी आमा
अनिल थापा काठमाडौं, १ असार – देशका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क । राजनीति जस्तै अस्तव्यस्त र फोहोर । वरिपरि दिनभरि धूलो उडिरहन्छ । मान्छेको आबादी बढेसँगै त्यहाँको अव्यवस्थित जिन्दगीले बाटो धूलाम्मे भइरहन्छ । यही अस्तव्यस्ततामा आफ्नो र सन्तानको भविष्य खोज्न दोलखाकी करुणा भण्डारी धूलोको पर्वाह नगरी सडकपेटीमा सानो व्यापार व्यवसाय गरिरहेकी छन् ।
छोराछोरीको तलवको १० प्रतिशत बुबाआमाका लागि अनिवार्य दिनुपर्ने, ६० कटेका बुबाआमाको बैंक खातामै पैसा राखिदिनुपर्ने
काठमाडौं । विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न छोराछोरीले ६० वर्ष कटेका बुबाआमालाई कमाइको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी आमाबुबालाई अनिवार्य पैसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको हो। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। आफ्नै सन्ततिबाट वृद्ध